Mamy Ravatomanga : Nanan-karena tamin’ny fanonganam-panjakana -
AccueilRaharaham-pirenenaMamy Ravatomanga : Nanan-karena tamin’ny fanonganam-panjakana
Milaza miara-mahita isika fa tao anatin’ny dimy taona monja no nampiroborobo ny harenan’i Mamy Ravatomanga. Villa Pradon, Azura Foulpointe sy Taolagnaro, fiaramanidina, villa sy “building” maro be ao Frantsa, kaonty manerana izao tontolo izao. Nivoaka tao amin’ny Panama papers ny anarany, ary voatonona tao koa ny orinasa “Essential Time Group limited”.
Niha nahantra tanteraka ny vahoaka malagasy vokatry ny fanonganam-panjakana notarihin’i Andry Rajoelina izay novatsian’i Mamy Ravatomanga vola. Maherin’ny 300 000 ireo vahoaka very asa mivantana taorian’ny fikatonan’ireo orinasa afaka haba ireny, ireo orinasa sy tranombarotra may sy nodorana nandritra ny 26 Janoary 2009 ireny. Niato ny AGOA, nandositra ny mpampiasa vola, nijanona avokoa ireo fanampiana maro avy any ivelany. Latsaka an-katerena ny firenena sy ny vahoaka fa izy ireo kosa (Mamy Ravatomanga, MAPAR) nihazakazaka mihitsy ny fitombon’ny harenany.
Mbola izy ireo (Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ary ny MAPAR) indray ankehitriny no mikotrika fanonganam-panjakana vaovao na dia fantatr’izy ireo tsara aza ny loza aterak’izany ho an’ny fiainam-pirenena sy ny vahoaka malagasy. Aza hadinoina fa nandritra ny fitondrana HAT no nampalaza ny fanondranana “bois de rose”. Maherin’ny 1000 kaontenera ny andramena nivoaka teto nandritra ny Tetezamita, ary misy horonantsary mirakitra izany mandeha any amin’ny tambazotra any. Mazava ho azy fa nahazo ny fiarovan’ny mpitondra HAT mba tsy ilazana hoe niray petsapetsa tamin’ireo mpanao trafika matoa tafavoaka teto Madagasikara ireo hazo sarobidy ireo.
Fehiny, nitondra tombontsoa manokana ho an’i Mamy Ravatomanga ny fanonganam-panjakana ny taona 2009, izay ny tenany rahateo no namatsy vola izany. Teo am-pelatanany ny fahefana tsy refesi-mandidy, ka izany no anton’izao fikotrehana fanonganam-panjakana manaraka izao indray.